Warqad Ku Socota Qurbojoogta Reer Minneapolis, ee gobolka Minnesota | http://kismaayodaily.com
Magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota waa magaalada ay degan yihiin Qurbojoogta racii ugu horeeyey ee ka soo qaxay dagaalkii sokeeyey ee wadankeena ka dhacay sanadkii 1990kii. Waana magaalada ay degan yihiin Qurbojoogta Soomaaliyeed ee ugu badan marka laga reebo Nairobi, Kenya.
Waa halka laga doortay qofkii Soomaaliyeed ee ugu horeeyey ee xil ka qabta Wadanka Maraykanka, kaas oo ahaa (AUN) Hussein Samantar. Waana meeshii qofkii labaad laga doortay ee xilka ka qabta wadanka Maraykanka, kaas oo ah Abdi Warsame. Welina waa magaaladii laga doortay qofkii sedexaad ee xil ka qabta wadanka Maraykanka, kaas oo ah Mohamud Noor oo hada u urdaaya in uu ku biiro aqalka hoose ee gobolka Minnesota, ee dalka Maraykanka.
Hadii aan dib ugu soo noqdo dulucda qoraalkayga, waxaa maalintii sabtida oo taariikhdu ahayd April 05teedi, 2014 la qabtay, Dugisa sare ee DeLaSalle, doorashadii ergada xisbiga Democratiga lagu soo xulayey qofka u matali lahaa doorashada kama dabaysta ah ee loogu tartamaayo aqalka hoose ee gobolka Minnesota, ee degaanka 60B oo ka tirsan magaalada Minneapolis. Waxaa halkaa ka dhacday doorasho taariikhi ah. Waa mid jiilka soo socdana ay wax badan ku faani doonaan.
Arintaa oo sidoo kale naxasuusisey jidkii uu bilaabey (AUN) Husein Samantar. Inkasta oo aan midna labadii tartamayaal oo kala ahaa: Mohamud Noor iyo Felis Kahn oo ahayd qofkii degaanka 60B u matalaysey dadka deegaankaas mudo dhan 40 sano, ayaa meel aan la filayn Mohamud Noor uga soo baxay isaga oo wata taageerada dad isku dhafan oo Soomaalida deegaanka degan hormood u yihiin.
Hase yeeshee doorashadaa waxaa haraysey kala qaybsanaan laga dareemayey Soomaalida ku dhaqan xaafada ay Soomaalida u badan tahay. Marka aniga oo aan cidna eed saarin madaama hada laga soo gudbay wareegi 1aad ee doorashada, ayna soo doorashadii primariga ee lagu kala bixi doono bisha August ee sanadkaan 2014, ayaan waxaan ka codsanayaa dhamaan dadka degaanka 60B in ay Mohamud Noor lagu taageero arintaan ALLAHA wayn siiyey, ALLANE ugu sahlay taageerada dadwaynaha Soomaaliyeed oo garab istaagay.
Waxaan qoraalka aan ku soo gabagabaynaaya in kuwa ka bayra arintaan taariikhiga ah in guud ahaan Soomaalida Minneapolis aysan u dhutinayn, gaar ahaana kuwa degaanka 60Bna ayna sidaas uga harayn in ay Mohamud Noor la garabgalaan dadaalkiisa. Ugu danbayna, kuwii ku raaca, kuna garab istaaga in ay ka mid noqon doonaan dhacdadaan taariikhinga ah.
Mohamed Barre – Junlay “Buluf” oo wax ka qora arimaha Soomaalida ee Magaalada Minneapolis, ee gobolka Minnesota – Junlay99@aol.com
Kismaayodaily On April - 7 - 2014
Somalia, Somalia Diaspora